ကုန်ကြမ်း testosterone Isocapronate အမှုန့် (15262-86-9) hplc≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟို steroids / testosterone အမှုန့်စီးရီး / testosterone Isocapronate အမှုန့်
SKU: 15262-86-9. Categories: testosterone အမှုန့်စီးရီး, ဟို steroids
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ testosterone Isocapronate မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (15262-86-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
testosterone Isocaproate အမှုန့်ဒါကြောင့်တစ်ဦးဟို Steroid တစ်မျိုးပေမယ့်ပိုပြီးလူကြိုက်များ Cypionate သို့မဟုတ် Enanthate Ester ကဲ့သို့တူညီသောဖက်ရှင်အတွက် Steroid တစ်မျိုးတွဲနိုင်ထားတဲ့ Ester မဟုတ်ပါဘူး။ Isocaproate ကိုလည်း testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းမှပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် Isocaproate ၏ဖြစ်ရပ်၌ဤပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကပူးတွဲမြင်သာသောအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
testosterone Isocapronate အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
testosterone Isocapronate အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: testosterone Isocapronate အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 53-55 ℃
testosterone Isocapronate အမှုန့်သံသရာ
testosterone Isocapronate အမှုန့် (CAS 15262-86-9) အမှတ်တံဆိပ်အမည်များ Sustanon 100 (ရပ်စဲ), Sustanon 250, Omnadren 250 သို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်း 4-methylvalerate
testosterone Isocapronate အမှုန့်အသုံးပြုမှု
Isocaproate ကဟို Steroid တစ်မျိုးပေမယ့်ပိုပြီးလူကြိုက်များ Cypionate သို့မဟုတ် Enanthate Ester ကဲ့သို့တူညီသောဖက်ရှင်အတွက် Steroid တစ်မျိုးတွဲနိုင်ထားတဲ့ Ester မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ Cypionate နှင့် Enanthate ကဲ့သို့ပင် Isocaproate ကိုလည်း testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းမှပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် Isocaproate ၏ဖြစ်ရပ်၌ဤပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကပူးတွဲမြင်သာသောအရပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ testosterone-Isocaproate, တစ်ခုတည်း Ester ပုံစံနီးပါးကြားဖူး၏, သငျသညျကိုတှေ့လျှင်ကထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိတဲ့အထူးအမိန့်ခဲ့သည်နှင့်အစဉ်အဆက်ကဒီတစ်ခုတည်း Ester form မှာ testosterone-Isocaproate လိုအပ်ပါတယ်စရာအကြောင်းမရှိတကယ်ရှိပါတယ်။ အဘယ်မှာကျနော်တို့အများဆုံးကတော့ Isocaproate Ester ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူး testosterone ဟော်မုန်းအရောနှော၌တည်ရှိ၏တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘယ်မှာ; အထူးသ Omnadren နှင့် Sustanon-250 ။ Omnadren နှင့် Sustanon-250 ပူးတွဲလေး Ester နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံး testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်; လေးတစျခုစုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းဝင်းထစေအရွယ်အစားကွဲပြား Ester အတွက်ကွဲပြား။ အားလုံးပြင်းထန်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဤနှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်ထပ်တည်းနီးပါးတူ; သူတို့ရဲ့စုစုပေါင်းမိတ်ကပ်နီးပါးတစ်ခုတည်း Ester ခြားနားချက်နှင့်အတူအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, ဒီလိုတူညီတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိသောနိုင်ပါသည်အဖြစ်။
testosterone Isocapronate အမှုန့်များ၏သောက်သုံးသောကဘာလဲ
နှစ်ဦးစလုံးဒြပ်ပေါင်းများအားဖြင့်သင်တို့ကို testosterone ဟော်မုန်းတစ်ခု 250mg / ml ကိုထိုးရှိသည်နှင့်ကြီးမားသော Ester မှသေးငယ်တဲ့များ၏အရောအနှောများကသင်တို့ရှိသမျှသည်ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျကြောင့် Propionate နှင့် Phenylpropionate Ester တစ်ဦးအစာရှောင်သရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်းဓာတ်ပေါင်းတစ်မျိုး၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိ, သင်ကြောင့် Caproate သို့မဟုတ် Decanoate Ester မှရှည်လျားသောတည်တံ့ testosterone ဟော်မုန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများရရှိကြသည်။ အဆိုပါ Isocaproate Ester ကြောင့်ဒီအသေးစားနှင့်အကြီးစား Ester အကြားတစ်ဦးအတွက်အကြားသဘောအခန်းကဏ္ဍကိုဖြည်တဲ့အလယ်အလတ်အရွယ်အစား Ester ဖြစ်ပါတယ်။ ကတည်ငြိမ်သည်အသွေးအဆင့်ဆင့်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်အဖြစ်မည်သည့်နှုန်းသည် Isocaproate Ester အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့်စုစုပေါင်းဒြပ်ပေါင်းများအားဖြင့်သင်တို့အချိန်ကြာမြင့်စွာကာလအတွက်စုစုပေါင်း testosterone ဟော်မုန်းအကျိုးကျေးဇူးကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤသားအပေါင်းတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေခံသဘောသဘာဝမှာဖြည့်စွက်၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သင်တန်း၏, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအသုံးပြုမှုနှင့်သင်အလိုရှိကြသည်တွင်အောင်မြင်စွာဖြည့်စွက်ရောက်ရှိဖို့ရန်သင့်အား enable ဒါအကျင့်ကိုကြည့်ယူချင်တယ်။
ဘယ်လို testosterone Isocapronate အမှုန့်အကျင့်ကိုကျင့်
Isocaproate မျှသာတစ်ခု Ester မဟုတ်တခုဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့မျှသာကြောင့်တွဲနေသည်ဟော်မုန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်, ဤအမှု၌, ထိုဟော်မုန်း testosterone ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ testosterone အားလုံးလူသားတွေနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီတော့ထုတ်လုပ်သောအစွမ်းထက်ဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်မှတဆင့်ကျနော်တို့မျှသာ exogenous အုပ်ချုပ်ရေးမှတစ်ဆင့်ဓာတုပုံစံပေးနေကြသည်; ခန္ဓာကိုယ်ကဒီ exogenous form မှာကွာခြားချက်ဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်သဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်မသိ; ဒါဟာတူညီတဲ့ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပင်စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်အခန်းကဏ္ဍကစားခြင်း, အ testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းအရေးကြီးသောကျော်လွန်ပြီးဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တည်ရှိနေသင့်ပါတယ်အမှန်တကယ်နိမ့်အဆင့်ကိုအခွအေနေကုစားလိမ့်မည်ဟုတစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ၏သင်တန်း, ကျနော်တို့စရိုက်များကိုတိုးမြှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားဆုံးကိုကြှနျတျောတို့၏စုစုပေါင်းအဆင့်ဆင့်ယူပြီးအသုံးပြုပုံသဘာဝကျကျထုတ်လုပ်နိုင်သောထက် ပို. ပင် testosterone ဟော်မုန်းပေးခွငျးအားဖွငျ့; ကိုယ်ခန္ဓာကိုမှမရရှိနိုင်ပါကပို testosterone ဟော်မုန်းရှိသည်အတိုင်းကိုငါတို့သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်။ ထိုကဲ့သို့သောဖြည့်စွက်မှတဆင့်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်တိုးမြှင့်သည်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုဖြစ်သကဲ့သို့ဆဲလ်တွေ, ပရိုတိန်းတည်ဆောက် In-ရသောနှုန်း; အားလုံးကြွက်သားတစ်သျှူးများ၏စုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းမှု၏ 16% ကိုယ်စားပြုနိုက်ထရိုဂျင်။ ထိုသို့သောအားဖြင့်ပင်အသှေးကိုအောက်ဆီဂျင်တိုးပွားလာနှင့် glucocorticoid ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျစေပါတယ်, ဖြည့်စွက်တိုးသွေးနီဆဲလ်အရေအတွက်ထပ်မံထိုကဲ့သို့သော။ glucocorticoids တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးသောသူတို့အဘို့ဤကြွက်သားတစ်သျှူးကိုဖျက်ဆီးတော်နှင့်အဆီအမြတ်မြှင့်တင်ရန်ကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဖြစ်ကြသည်။
သူတို့အားအချို့ကြီးမားတဲ့စရိုက်လက္ခဏာများမှာနေစဉ်, testosterone ဟော်မုန်းလည်းအင်ဆူလင်-လိုပဲ growth factor-1 (IGF-1) ထုတ်လုပ်မှုတိုးပွါး; IGF-1 ကြီးမားတဲ့ဟိုပါဝါတစ်အစွမ်းထက်သဘာဝထုတ်လုပ် peptide ဟော်မုန်းဖြစ်ခြင်း, ကြီးမားတဲ့ rejuvenation ဂုဏ်သတ္တိများတင်ဆောင်လာသောဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ စုစုပေါင်းဟိုလေထုတိုးမြှင့်နေသည်ဒီမှတဆင့်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအထက်ပါစရိုက်လက္ခဏာဖော်ပြခဲ့တဲ့, သင်၏ဇီဝြဖစ် revved နှင့်ကအားလုံးကိုသင်တစ်ဦးထက်ပိုသောထိရောက်သောနှင့်ထိရောက်စေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို In-ပတ်သတ်ပြီးအကျိုးခံစားခွင့်မှဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတောင်းခံရစေခြင်းငှါ, သင်သည်ဤသူအပေါင်းတို့တဲ့ကုထုံးသဘောအရဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုတောင်းခံရပါမည်နည်း ဒါကြောင့်ကုထုံးကုသမှုမှုနှငျ့ဆအမျှအထက်တွင်ဆွေးနွေးစရိုက်များအပေါငျးတို့သချို့တဲ့တွေ့ရှိခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်နေတဲ့သင့်လျော်သောအဆင့်အထိသူတို့ကိုပြန်တတ်၏။ testosterone ဟော်မုန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်စိတ်ထိန်းညှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်, အတွေး၏ရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်အထွေထွေသဘောထားအပေါ်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ထပ်မံအပေါင်းတို့, ထိုကဲ့သို့သောဒေသများတိုးတက်နေကြသည်။ ၏သင်တန်း, ဤ Isocaproate testosterone ဟော်မုန်းအခြေစိုက်ဒြပ်ပေါင်းများခဲယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ခုတည်း Ester testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများထိုသို့သောအဆုံးကိုရောက်ရှိဖို့အသုံးပြုနေကြတယ်, ကုထုံးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သတ်မှတ်သည်; အမှုသည်အတိုင်း, စွမ်းဆောင်ရည်ကယ့်ကိုဒီမှာသာစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်ပြီး, စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူဖွင့်ကြည့်ယူကြကုန်အံ့။
testosterone Isocapronate အမှုန့်များ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Omnadren နှင့် Sustanon-250 တူသော Isocaproate အခြေစိုက်ဒြပ်ပေါင်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှစ်ခု generalized အမျိုးအစားသို့ပြိုပျက်နိုင်ပါတယ်; အထက်ပါစရိုက်လက္ခဏာနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဝင်း၏ဤအမျိုးအစားတစ်ခုတည်း Ester ပုံစံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများ။ အစောပိုင်းအပေါ်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, တစ်ဦး testosterone ဟော်မုန်းအရောအနှောများအကျိုးအတွက်တစ်အသေးစားနှင့်အကြီးစား Ester သဘောအရနှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ဤအနေနဲ့ခြုံငုံကြာချိန်သဘောအရတာရှည်တည်မြဲသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအစာရှောင်သရုပ်ဆောင် testosterone ဟော်မုန်းနှစ်မျိုးလုံးပေးပါသည်။ ဒါကအလွန်အမင်းရိုးရှင်းသောအသံစခွေငျးငှါ, ဒါပေမယ့်ထက်ကပိုပြီးဘာမျှတကယ်ပဲရှိပါတယ်။ ထိုအခါမှသာအထက်ပါစရိုက်လက္ခဏာပေါ်နှင့် Omnadren နှင့် Sustanon-250 အဖြစ်အခြေခံပြီးအမှန်တကယ်အကျိုးခံစားခွင့်နီးပါးတင်းကြပ်စွာသာကြောင်းအလငျး၌အကျိုးကျေးဇူးများကိုအာရုံစိုက်ဖို့င့်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အသုံးပြုကြသည်ရှိသည်။
off-ရာသီအားကစားသမားများအတွက်ပိန်ကြုံသောဒြပ်ထုနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏သိသာထင်ရှားသောပမာဏပေါင်းထည့်ရန်ရှာနေတစ်ဦးချင်းစီ, Isocaproate ပုံစံများကိုသူတို့သိသိသာသာနှစ်ဦးစလုံးကြီးစွန်းမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါတိုးမြှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ်လေထုအသုံးပြုပုံယခုသင်လျော့နည်းခန္ဓာကိုယ်အဆီစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူပိုပြီးပိန်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဖို့နိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြောင်းတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, တူညီတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများလွန်းဖြတ်တောက်ဘို့သုံးနိုင်တယ်; ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တစ်တိုးမြှင်ဇီဝြဖစ်နည်းလမ်းအဆီ-ကိုမီးရှို့စွမ်းရည်တိုးမြှင့နှင့် testosterone ဟော်မုန်းဟာကြီးမားတဲ့ပိန်တစ်ရှူးထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါသည်အဖြစ်ရိုးရှင်းစွာဆိုဖြတ်တောက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။
ကြောင်းမလုံလောကျရဲ့ရှိလျှင်, မသက်ဆိုင်အသုံးပြုမှုကိုသင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဤ Isocaproate အခြေစိုက် testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများကိုသင့်ရဲ့ကြွက်သားခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်ရန်တော်မူမည် သူတို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသင့်ရဲ့ခြုံငုံနှုန်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပို. ပင်စွမ်းအင်နှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျယာထွက်အဖြစ်အစာမရှောင်ကြလိမ့်မည်ကိုသငျသညျအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကြလိမ့်မည်နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုထိရောက်မှုနှုန်းမှာပြုပြင်ကြလိမ့်မည်, ထိုအချည်းနှီးဖြစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်မယ့်လျှင်။ နညျးလမျးမြားစှာမှာ testosterone ဟော်မုန်း Steroid တစ်မျိုးနားလည်ရန်အလွယ်ကူဆုံးတအပေါင်းတို့၏အရိုးရှင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဟာရိုးရှင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်စဉ်ကအဖိုးတန်အပေါင်းတို့နှင့်အချိန်ဖြစ်ကောင်းတန်ဖိုးအရှိဆုံးဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကကျန်းမာသန်စွမ်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမှကြွလာသောအခါထို့ပြင်ကြောင့်လည်းအများဆုံးကောင်းစွာသည်းခံတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, ထက်ပိုပြီးအဖိုးတန်ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပါတယ်။
testosterone Isocapronate အမှုန့်စျေးကွက်
testosterone Isocapronate အမှုန့်မဆိုဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှိပါသလား
Isocaproate testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားလုံး testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်, ဤအကြီးအကျယ်သူတို့တတ်နိုင်သမျှဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျန်းမာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးများကယေဘုယျအားဖြင့် 100% ရှောင်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကျန်းမာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကိုသင်မျှသာတစ်ဦးပြင်းထန်ခွအေနအေချို့တဲ့နေကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ, ဒါပေမယ့်လည်းသင့်ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်နှင့်လက်စထရောအဆင့်ကိုသငျ့လျြောသောဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ခြုံငုံကျန်းမာရေးအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ပြင်တာဝန်ရှိအသုံးပြုမှုအလွန်အရေးကြီးသည်, ဤသင်သည်ထိုသို့သောကျန်းမာရေးကောင်းမွန်၏ဆက်လက်အားပေးအားမြှောက်မယ့်လမ်းအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်; သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့လျှင်, ဒီတာဝန်ယူဖြည့်စွက်အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ရဲ့ testosterone ဟော်မုန်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာကြည့်ယူပါစေ, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. ပြုပါနှင့်သင့်အောင်မြင်မှုသေချာနိုင်ပါတယ်သောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိ။
က testosterone ဟော်မုန်းဝင်းရဲ့, ဤ Omnadren နှင့် Sustanon-250 တူသော Isocaproate ဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘို့အဝင်ဒါမှမဟုတ်သင်ကထင်နိုင်ပါတယ်ကိုမဆိုဝင်း aromatize သွားလျှင်၎င်း, အီစထိုဂျင်သို့ testosterone ဟော်မုန်း၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုရည်ညွှန်းမွှေးကြိုင်။ အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်မြင့်တက်အဖြစ်, ဒီဦးတည်သွားစေခြင်းနှင့်လူအပေါင်းတို့၏အသုံးအများဆုံးဟိုတီးရွိုက်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအချို့မှအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်; ကျေးဇူးတင်စရာသူတို့အားလုံးရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အမှန်တကယ်ဖြည့်စွက်သောသူအပေါင်းတို့သည်အမျိုးသားများတွင်အာမခံပေမယ့်သင့်လျော်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူအနတ္တကြောင်းတဘက်တချက်၌-အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရှိ၏, ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးရန်ပေမယ့်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေပထမဦးဆုံးဂရုစိုက်ပါစေလိမ့်မယ်, testosterone ဟော်မုန်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်:
• Gynecomastia - အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်တိုးသကဲ့သို့, ဟော်မုန်း gynecomastia သို့မဟုတ်အထီး-ရင်သားကင်ဆာပျတိုးစေသည့် receptors ပူးတွဲသို့သော်ဤဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့သော Anastrozole (Arimidex) သို့မဟုတ် Letrozole (Femara) အဖြစ်တစ်ခု Aromatase တား (AI) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအခွအေနေကိုရှောင်ရှားပါလိမ့်မယ်။ AI အဖွင့်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမှ aromatase ဖြစ်စဉ်ကိုတားစီး, ပင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စုစုပေါင်းအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုလျှော့ချ; ကမတည်ရှိပါဘူးဆိုရင်ဒါဟာပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်, ရွေးချယ် estrogen receptor Module (SERM ရဲ့) လည်းထိုကဲ့သို့သောဆေး Tamoxifen citrate (Nolvadex) အဖြစ်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မလုံလောကျမြားစှာသောကိစ္စများတွင်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သောအားဖြင့် binding ကနေအီစထိုဂျင်ကာကွယ်ပေးနိုင်သည့် receptors မှ binding အားဖြင့် SERM ရဲ့ function ကို; သူတို့ aromatase သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းအီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်တားစီးကြဘူး, ဤ AI အဖွင့်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချွေတာရေးကျေးဇူးတော်ဖြစ်ကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။
•ရေ retention - ကြောင့်မွှေးကြိုင်မှပိုလျှံအီစထိုဂျင်အဆိုပါတရားခံဖြစ်တယ်, ပိုလျှံအီစထိုဂျင်ကိုလည်းနှင့်အတူစတင်ပုံမှန်အစည်းအဝေးဖောင်းဖို့သင်ပိုမိုထိခိုက်မခံစေသည်။ သငျသညျ overeat အခါ, အထူးသဖြင့်သင်ကရေကိုင်သွားကြသည် carbohydrates နှင့်အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်မြင့်မားလျှင်တောင်မှပိုဆိုးလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး AI အသုံးပါနှင့်သင့်တဲ့အစားအစာကိုထိန်းချုပ်လျှင်၏သင်တန်း, သငျသညျပြဿနာတစ်ခုရှိမနေသင့်, သင်ရသေးတုန်းပဲဖွယ်ရှိသည်ဤသည်သင်၏အစားအစာကိုသင်ဖြစ်ဖို့ကယုံကြည်စေခြင်းငှါသကဲ့သို့သင့်လျော်မဟုတ်ပါဘူးဆိုလိုတယ်ထက်ရေကိုပိုမိုကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ AI အသုံးနေတယ်ဆိုလျှင် ။
•အမြင့်လက်စထရော - ပိုလျှံအီစထိုဂျင်မြင့်မားတဲ့ LDL လက်စထရောအဆင့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထိုးနှင့်သင့်ခြုံငုံလူနေမှုပုံစံစတဲ့အရာအားလုံးထက်ထက်ပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင့်လျော်သောဆေးများကိုအလွန်အရေးကြီးသည်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါလက်စထရောဖော်ရွေသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလျော်သောအစားအစာ, ပဒေသာကိုဆိုလိုသည်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုရှောင်ရှား။ သင်ဤလုပျနိုငျလြှငျသငျမွငျ့မားလက်စထရောတစ်မျိုးဗီဇရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးယူဆသငျသညျဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်သည်။
•သွေးတိုး - ပိုလျှံအီစထိုဂျင်မြင့်မားသွေးဖိအားကိုအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ထိုးနှင့်သင့်ခြုံငုံလူနေမှုပုံစံစတဲ့အရာအားလုံးထက်ထက်ပိုကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင့်လျော်သောဆေးများကိုအလွန်အရေးကြီးသည်ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒါဖော်ရွေသွေးဖိအားသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့နေထိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုလျော်သောအစားအစာ, ပဒေသာကိုဆိုလိုသည်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ, လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုရှောင်ရှား။ သင်ဤလုပျနိုငျလြှငျသငျသွေးတိုးရန်မျိုးဗီဇရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးယူဆသငျသညျဒဏ်ငွေဖြစ်သင့်သည်။
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအထက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်နိုင်သမျှသော်လည်း, ဖြည့်စွက်သောသူအပေါင်းတို့အတွက်အာမခံကြောင်းတဦးတည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်ရှိ၏, သင့်ရဲ့သဘာဝက testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု၏ဖိနှိပ်မှု။ ဤသည် testosterone ဟော်မုန်းဒြပ်ပေါင်းများသို့မဟုတ်မည်သည့် testosterone ဟော်မုန်းဝင်း Isocaproate တစ်မူထူးခြားတဲ့အယူအဆမျှမက, In-တကယ်တော့ကြောင့်အများဆုံးအားလုံးဟိုစတီရွိုက်နှင့်အတူစစ်မှန်သောကိုင်ထားလိမ့်မယ်တဲ့အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ၏သင်တန်း, သဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုတစ်ဦးအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအခွအေနေပျေါစနေိုငျသျောလညျးသငျ exogenous testosterone ဟော်မုန်းနှင့်အတူဖြည့်စွက်နေကတည်းကသင့်အမှု၌, ဒီမျှစိုးရိမ်စရာရှိ၏ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင်ကလိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေးပါတယ်။ ဒါတောင်မှအဖြစ်သဘာဝအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုကဒီကျုံ့ရန်သင့်ဝှေးစေမည်နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့်ကောင်းသောသတင်းရှိသေး၏။ ပြီးတာနဲ့အားလုံး exogenous Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှုကိုရပ်စဲသည်နှင့်အပေါငျးတို့သ exogenous တီးရွိုက်ဟော်မုန်းကသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုတဖန်စတင်ပါပြီလိမ့်မယ်အဖြစ်သင့်ဝှေးသူတို့ရဲ့ပုံမှန်အရွယ်အစားပြန်လာပါလိမ့်မယ်သင့် system ကိုရှင်းလင်းကြသည်။ ဒါဟာမှတ်သားရမည်, ပြန်လည်နာလန်ထူသငျသညျပြင်းထန်စွာကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုဖြည့်စွက်အလေ့အကျင့်ရန်သင့် HPTA ကိုပျက်စီးစေ, သင်ကြိုတင်ဖြည့်စွက်ဖို့အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းကနေမခံစားခဲ့ဘူးကြောင်းမပြုခဲ့ယူဆနေသည်။
AASraw ထံမှ testosterone Isocapronate အမှုန့် (CAS 15262-86-9) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို
AASraw injuection အသုံးပြုမှုများအတွက်ကာယဗလသို့မဟုတ်မြေအောက်ဓာတ်ခွဲခန်းများမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ် 98% testosterone Isocaproate ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဖြစ်သည်။
testosterone Isocapronate ကုန်ကြမ်း Powder ချက်ပြုတ်နည်း: